HomeWararka Maanta SomaliskaMaxaa ku soo kordhay Dadka loo keenayo Qoysaskooda Sweden ee kala maqan
Dad badan oo xaq u leh inay ku yimaadaan Iswiidhan xiriir qoys ayaa hada sugaya waqti dheer. Dhowr safaaradood iyo qunsuliyado iswiidhish ah ayaa xaddiday howlahoodii intii ay socdeen Xanuunka Corona
Kaywan Jaf wuxuu ku nool yahay magaalada Kumla xaaskiisuna waxay ku samayn lahayd wareysi safaaradda Tehran bishaan Oktoobar, laakiin dib ayaa loo dhigay illaa bisha Sebtember ee sannadka soo socda waana mudo sanad ah waxaa jira dad kale oo wareysigooda dib loo dhigay.
– Runtii saameyn ayay nagu yeelatay xagga xiriirka iyo nolosha sidoo kale, waxaan u qorsheynay inay halkaan timaaddo. Waxay bilaabi lahayd markiiba waxbarasho, waxay bilaabi lahayd shaqo waxayna bilaabi lahayd nolosha , ayuu yidhi Kaywan Jaf.
Dhowr safaaradood iyo qunsuliyadaha Iswiidhan ayaa xaddiday tirada wareysiyada arrimaha socdaalka sababo la xiriira cudurka faafa ee corona. Dib u eegis ay wakaaladda socdaalka ku sameysay Ekot ayaa muujineysa in ugu yaraan 15 hey’adood oo ajnabi ah ay soo bandhigeen nooc ka mid ah xaddidaadda booqashada. Kuwaas waxaa ka mid ah Washington, Tehran, Islamabad ,Athens iyo wado kale oo dhoor ah.
Safiirka Sweden ee Tehran wuxuu ka xun yahay in dadku dareemaan jahwareer.
– Waxaan si buuxda u fahamnay jahwareerkooda iyo xaaladda ay ku sugan yihiin. Laakiin nasiib darro, taasi waa xaaladda. Waana inaan awoodnaa inaan helno howlaheena caadiga ah iyo qaababka aan u shaqeyno ee yareya qatarta iyo yareynta qatarta shaqaalaha safaarada, ayuu yiri Mattias Lentz oo ah danjiraha Sweden ee Tehran.
Hey’adda laanta socdaalka ayaa hada fiirineysa xalal kale oo lagu caawinayo kuwa hada ay saameysay Corona una balansan wareysi iyo kuwa kale ee la ogolaaday.
Waxaa isku dayeynaa wax walbo inaan sameyno kuwaasi oo aan awoodno si aan horay ugu sii socono, ayay tiri Agneta Kundoori oo ka tirsan Hay’adda Socdaalka.
– Sannad ayaan sugeynay. Markaad isqabtaan waxaad dooneysaan inaad isla noolaataan, waxaad dooneysaan nolol wada jir ah. Marka taasi waa sababta ay u adag tahay. Waxaan ku jirnaa xaalad adag. Ma naqaano waxa aan sameyno, ayuu yiri Kaywan Jaf.
Dad badan oo ku sugan daafaha caalamka ayaa sameyn waxay kala kulmeen xanuunka Corona waxaana Sweden ku jirtaa Dalalkaasi madama dad heesto Visaha qaar aysan wali dalka soo gaarin sababo la xiriira Xaalada Corona inkastoo Laanta socdaalka ay dhawaan sheegtay in ay bilowday safarada.